Sarkaal ka tirsanaa ciidanka daraawiishta Puntland oo lagu dilay waqooyiga Gaalkacyo – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Sarkaal ka tirsanaa ciidanka daraawiishta Puntland oo lagu dilay waqooyiga Gaalkacyo
Kooxo ku hubeysan bistoolado ayaa caawa xaafadda Faluuja oo ku taalla waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku dishay sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidanka Daraawiishta maamulka Puntland.
Sarkaalkaan la dilay oo lagu magacaabi jiray Xaaji Cariish ayaa la sheegay in dhowr rasaas lagu dhuftay, xilli uu ku sugnaa xaafadda Faluuja ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo.
Kooxihii dilka u geystay sarkaalkaasi ayaa la sheegayaa inay islamarkiiba goobta isaga baxsadeen, waxaana markii dambe halkaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland oo howlgalo baaritaano ah halkaasi ka sameeyay.
Ma jirto cid illaa iyo haatan baaritaankaasi lagu soo qabtay, iyadoona sidoo kale aysan jirin cid sheegatay mas’uuliyadda dilka sarkaalkaas.
Ma ahan markii ugu horeeysay oo sarkaal ka tirsan maamulka Puntland lagu dilo magaalada Gaalkacyo, waxaana dilal ceynkaan oo kale hore magaaladaasi loogu geystay saraakiil iyo mas’uuliyiin ka tirsan maamullkaas.